प्रेमपथका वीर शहीद नवराज विक | Ratopati
कोरोना कैरन – २०
personखगेन्द्र संग्रौला exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १८, २०७७ chat_bubble_outline1
#खगेन्द्र सङ्ग्रौला#कोरोनाभाइरस#नवराज विक#रुकुम घटना
June 1, 2020, 2:19 p.m. मिगिन मिगिन
कमेन्ट पढ्दा नेपाली हरुको सम्बेदनशीलता हराए जस्तो लाग्यो । मान्छे मारी नै सक्यो , आँखा चै फुटाएको रैछ कि नाई भने जस्तो । होला लक डाउन तोडेर नवराज र उसको साथीहरुले गल्ती गरे होलान । सत्र बर्षकी केटिलाई भगाउन लागेर गैर कानुनी काम गर्न खोजे होलान । हुल बांधेर गए त्यो पनि मानियो । तर यी सबैको एउटै समाधान ज्यान मार्नु हो त? प्रहरी प्रशासन थिए , कानुन थियो त्यता चै किन नसोचेको ? आफू भन्दा ठुला जातिसंग प्रेम गरेर नवराजले गल्ती गरे भन्नेहरुले केटिले सानो जातसंग प्रेम किन गरेको भनेर प्रश्न चै गर्दैनन । यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भोलिको समाज कस्तो होला? नवराजलाई लगाइएको आरोप सबै लेम एक्स्क्युज हुन ।